HGH Thailand pharmacy - lahatsoratra momba ny hormone mitombo
Avy amin'ny HGH Thailand Janoary 10, 2018
HGH (somatotropin) any Thailand
Ny hormone (somatotropine) - ny malaza indrindra amin'ny atleta, mpanao fampiroboroboana ary ireo mpizaha tany hafa any Thailandy, dia mpitsabo ara-panafody. Talohan'izay, raha anabolika, somatotropin dia nampiasaina tamin'ny fanorenan-trano, ny lanjany ary ny fanatanjahan-tena hafa mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny mozika, amin'izao fotoana izao, ireo atleta, gymnasts ary solontenan'ny lalao amin'ny lalao dia mampiasa azy io kokoa noho ny mpamboly bodybuilders.
Ny somatotropine dia fitaovana tsara hampitomboana ny fiaretana, izay voaporofo amin'ny fitsaboana ny ratra. Noho izany, mitombo hatrany ny habetsahan'ny zava-mahadomelina. Amin'ny farany, ny fahaiza-manao, amin'ny fampiasana ity vokatra ity, dia afaka mampitombo ny fitomboan'ny tanora atleta iray, ary zava-dehibe koa izany ary mendrika lahateny iray manokana.
Nahoana ny vatana no mila hormone somatotropic (HGH)? Soma dia midika hoe vatana. Somatotropic midika hoe manana "tropisma" - fiaraha-miasan'ny vatana. Raha ny fitomboan'ny vatana, somatotropin no tena fototry ny fitomboana. Ny fitomboan'ny vatana dia miankina amin'ny habeny, na amin'ny lavany na amin'ny sakany. Arakaraky ny somatotropine ao amin'ny vatana dia mihabetsaka ny olona.
Rehefa mihalalina ny fitomboan'ny taolam-paty eo amin'ny taolana amin'ny taolam-paty, ary mitombo ny taolam-paty lava, dia mbola mitombo ny taolana. Ao amin'ny faritra sasany ao amin'ny taolam-paty, ny faritra fitomboana dia tsy iharan'ny fanararaotana mandritra ny fiainan'ny olona iray. Ny fitomboan'ny sehatra toy izany dia eo amin'ny valanorano, ny orona, ny tanana ary ny tongotra.
Indraindray dia mitranga izany noho ny antony samihafa amin'ny fahatanorana, ny
Mihabetsaka ny sekreteran'ny hormonina mitombo. Avy eo dia mitombo ireo goavam-be, izay indraindray mahatratra mihoatra ny 2 m. Izany toe-javatra izany dia heverina ho aretina ary antsoina hoe "gigantisme." Olona maro eto amin'ny planeta, na izany aza, dia ho faly tanteraka tsy ho lasa goavam-be, fa olona ambony ihany. Ray aman-dreny maro no te hampitombo ny fitombon'ny zanany, ary efa azo atao izany.
Etsy andaniny, ilay lehilahy avo indrindra niaina teto an-tany, dia nitombo ny 2 m 48 cm (!). Indraindray ny fitomboan'ny hormone mitombo dia mitombo be ao amin'ny vatan'ny olon-dehibe, raha efa mihidy ny ankamaroan'ny faritra mitombo. Amin'ity tranga ity dia mihalehibe ny valanorano, ny orona, ny tanana ary ny tongotra. Izany toe-javatra izany dia antsoina hoe acromegaly, izany hoe fitomboan'ny ampahany amin'ny vatana. Ao amin'ny vatan'ny olon-dehibe sy feno, somatotropin dia manatanteraka asa anabolika.
Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny dingan'ny proteinina ao amin'ny taova rehetra sy ny vatana tsy misy antenaina. Vitsy ny olona mahalala fa ny HGH plus ny zavatra rehetra dia hormone ihany koa. Ao anatin'ny adin-tsaina dia mihamitombo ny lanjan'ny glucose ao amin'ny ra, ary manampy amin'ny vatana ny mampifanaraka amin'ny toe-javatra tsy mampino amin'ny fampitomboana ny proteinina, indrindra amin'ny rafi-kery eo amin'ny sela.
Noho izany, ny olona manana lalàm-panorenana matanjaka miaraka amin'ny taolam-paty matanjaka tsara amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa noho ny fahasarotam-piainana sy ny fisainana eo amin'ny fiainantsika. Ampian'izy ireo amin'ny somatotropin izany. Koa satria tsy mihidy ny faritra mitombo amin'ny valanorano, ny orona, ny tanana ary ny tongotra, dia mitombo mandritra ny androm-piainana ireo "ampahany" ireo. Fa na dia ao anatin'ny fahanterana aza izy ireo dia mihalehibe, amin'ny ankapobeny dia 5-8 mm.
Misy anefa, ary ny fisian'izy ireo, ny olona iray amin'ny taona fisotroan-dronono, ny orona sy ny hatoka dia mahatratra ny haben'ny fahamendrehana, izay loharano maharitra ho an'ny vazivazy. Ny fanadihadiana goavana any Thailand dia nampiseho fa aorian'ny fahatanterahan'ny fitomboana amin'ny fahatanorany, mbola mitombo ihany ny olona mandritra ny fiainana aorian'izay ". Saingy tsy dia kely loatra izany fitomboana izany. Amin'ny taonan'ny 60, lehilahy iray dia mitombo 8-10 mm lava ary manodidina ny sakany mitovy.
Io fitomboana io, anefa, dia tsy hita maso noho ny fanipazana sy ny fihenan'ny hozatra, izay tonga amin'izao fotoana izao amin'ny ankamaroan'ny olona. Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo ao anatin'ny fahazazany, dia mihalehibe ny olona, ​​ary antsoina hoe tantsaha izy ireo. Ao amin'ny fitenin'ny dokotera, io toe-javatra io dia nantsoina hoe "hypophysial nanism". Ao anatin'ny tsy fahampian'ny hormone mitombo eo amin'ny olon-dehibe ny fitomboana ara-dalàna dia mitombo ny karazam-pandrefesana isan-karazany, izay indraindray aza dia miafara amin'ny fahafatesana, fa tsy dia fahita firy loatra. Ao anatin'izany, ny anarana hoe "hypophysial nanisme" dia efa manolotra sahady fa somatotropine dia novokarina tao amin'ny andrin-jiolahy.
Inona no dikan'ny gland ankehitriny, na saika ny rehetra? Ny fihanaky ny pitipoa dia ny ampahany ambany amin'ny sera, ny fako eo amin'ny fototry ny atidoha. Ny endriky sy ny haben'ny fihenam-bidy dia mitovy amin'ny serizy. Ny fihanaky ny gripa dia voaro tsara amin'ny herin'ny vulnerable mora.
Ao amin'ny trangan-taolana mahery izy io - ny "tapa-torka Tiorka" eo amin'ny fotony. Ny hormonina amin'ny gripa dia mamokatra hormones hafa - hormonina mampirisika ny tiroida (mampisy ny hormonina miaro amin'ny tiroida), adreno corticotropic (manasitrana ny androngo adrenal), gonadotropic (mavitrika ny firaisana), ary ny hafa.
Ny asan'ny pitipika dia tarihin'ny hypothalamus, faritra manokana amin'ny midbrain. Any no misy ny liberines sy ny statins. Ho an'ny hormone somatotropika, somatoliberin sy somatostatin dia zava-dehibe. Ny hypothalamus, Somatoliberin, dia manatsara ny hormone hormonina miafina amin'ny glandy. Somatostatin, mifanohitra amin'izany, dia manakana ny famokarana somatotropine. Raha te hampitombo ny habetsan'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana isika, dia ilaina ny mampitombo ny habetsan'ny somatoliberin, na hampihenana ny habetsahan'ny somatostatin.
Nandritra ny fotoana ela dia noheverina fa ny hormone mitombo dia afaka miasa amin'ny tavy, ny cartilage ary ny taova anatiny. Taorian'izany dia hita fa tsy izany no izy. Ny HGH dia afaka mitarika ny sela amin'ny vitro fotsiny ao anatin'ny fotoam-piavonan'ny 2,000 avo kokoa noho ny physiologique. Ao amin'ny vatana mahazatra, ny HGH dia miasa amin'ny atiny.
Ny aty dia miteraka fitomboan'ny tosidra, izay antsoina koa hoe somatomedine. Somatomedin - koa manana fiantraikany amin'ny anabolika sy ny fitomboana, izay manimba ny sela kininina. Amin'ny maha-dokotera ahy, matetika aho dia mahita tranga izay rehefa tsy marary mafy ny zaza dia mitohy mitombo ny zaza ary misy fepetra mitovitovy amin'ny fihanaky ny pitipika, na dia vokatry ny tsy fisian'ny somatomedine aza ny aretina.
Etsy ankilany, ny akromegaly dia mahazatra amin'ny habetsaky ny glucose ara-dalàna ao amin'ny ra. Ny aretina amin'ity tranga ity dia vokatry ny habetsahan'ny somatomedine ao amin'ny ra. Amin'ny ankapobeny, toy izao manaraka izao ny fifehezan'ny fanabolismana amin'ny hormone somatotropika ampiharina amin'ny hozatra skeleta:
Raha te hanana ny fiantraikany amin'ny anabolika isika, dia lazao, amin'ny cellule misy azy, dia afaka:
1. Ampitomboy ny isan'ny somatoliberina ao amin'ny hypothalamus.
2. Ampiheno ny habetsahan'ny somatostatin.
3. Midira ao amin'ny vatana STG.
4. Ampidiro ao amin'ny body somatomedin.
Amin'ny iray amin'ireo tranga ireo dia ho tanteraka ny vokatra farany. Ary afaka mandeha eo amin'ny lalana fampidirana ny zavatra ilaina avy any ivelany ianao, ary amin'ny làlana hanentanana ny famokarana ataon'ny orinasa. Afaka mandeha hatrany amin'ny lalan'ny fampitomboana ny
ny fahatsapana ny sela amin'ny sakafo mahavelona, ​​fa ity resaka ity dia mbola ho avy. Andeha hojerentsika akaiky kokoa ny fitsipika somatotropin manontolo
ary manomboka amin'ny fitsaboana amin'ny somatotropin.Afterany, amin'ny lafiny ara-tantara, dia nanomboka izany avokoa izy rehetra. STG dia hormonina peptide. Io dia ahitana ny asidra amine amino ampy raha misy resa-n'ny amine 191 amino. Hatramin'ny 1921, ny mpitsabo physiologists tamin'ny fanandramana ny biby dia nanosika ny gigantisma fanandramana rehefa nampiditra volavolan'olom-bolo tamin'ny volon'ireo vorona mpihinan'omby. Araka ny hitantsika dia efa voaporofo nandritra ny fotoana ela ny fahafahan'ny fampitomboana ny fivoaran'ny tovovavy tanora.
Ny somatotropine voadio tamin'ny biby dia nalaina voalohany tany 1944, uman - tao amin'ny 1956. Na dia izany aza, niaraka tamin'ny fanampian'ny STH, dia nisy nitifitra tamin'ny herin'ny maizina sy ny maina ny tsimok'aretina. Taorian'izay, dia hita fa misy karazana STH farafahakeliny telo fara-fahakeliny. Ao amin'ny olona, ​​ny STH dia mamokatra ao amin'ny efitrano eosinophilicus of the hypertrophy.
Ao amin'ny tumors ao amin'ny cellules eosinophile, amin'ny ankapobeny, mihatra ireny tranga ireny amin'ny fandrosoana rehefa mihamaro ny fitomboan'olombelona noho ny 2 m. Amin'ity dingan'ny fampandrosoana ny fitsaboana ity, dia voan'ny aretina toy izany ny tumors. Na izany aza dia mitombo ny fitomboana. Anisan'ireo mpilalao baolina kitra manerantany, misy olona maro izay nandalo fitsaboana ara-pahasalamana nandritra ny taonany.
Voafehy ny orona (!), Ary velona ilay olona, ​​toy ny hoe tsy nisy zava-nitranga. Misy anefa ireo tranga tsy azo ampiasaina. Etsy ankilany, mitombo ny isan'ireo mpilalao "mpilanja", izay nateraky ny hormonina nitombo nandritra ny fahatanorany mba hampitomboana ny fitomboana.
Ny tsiambaratelon'ny hormonina fitomboan'ny rà dia mavesa-danja. Mandritra ny andro dia misy ny tendrony lehibe 6-9. Ny isan'ny tampon-tampony dia indraindray tonga amin'ny 12. Mihamitombo ny haavon'ny tampony amin'ny asa atao ary mandritra ny torimaso. Raha ny sakafo, ny haavon'ny tampon'ny famotsorana somatotropine, raha ny mifanohitra, dia mihena, indrindra raha ity sakafo ity dia miteraka tsiranoka.
Ny STG an'ny biby mampinono rehetra dia samy manana ny asany biolojika. Ny karazam-biby ambany ambany ataon'ny phylogenetic dia mihetsika amin'ny GHG ambony, fa ny STG amin'ny karazana ambany dia tsy mihetsika amin'ny karazana ambony. Ny STG olombelona, ​​ohatra, dia mihetsika amin'ny karazam-biby isan-karazany, saingy tsy misy ny biby somatotropin olona mihetsika.
Ny karazam-biby STG dia hihetsika amin'ny karazam-biby tsy dia lavitra loatra, fa tsy amin'ny olombelona. Ny STG an'ny trozona dia hiverina indray amin'ny biby amin'ny fikambanana ambany kokoa, fa tsy amin'ny olombelona na ny monkey, sns.